भरतपुर अस्पतालमा पोषण पुनःस्थापना गृह सञ्चालनमा कठिनाईं – Nepaliko Aawaj
शनिबार, मंसिर १८, २०७८ | Saturday, December 4, 2021
भरतपुर अस्पतालमा पोषण पुनःस्थापना गृह सञ्चालनमा कठिनाईं
प्रकाशित मिति: मंगलबार, कार्तिक १९, २०७६ | ८:२१:४८
– नारायण अधिकारी
चितवन । भरतपुर अस्पतालमा रहेको पोषण पुनःस्थापना गृह बजेटको अभावमा सञ्चालनमा कठिनाई भएको छ । साउन यता त्यहाँ कार्यरत– ९ जना कर्मचारीले तलब पाउन सकेका छैनन् भने उनीहरुले नै खर्च गरेर बिरामीको हेरचाह गर्दै आएका छन् ।
गृहकी संयोजक छमकला काफ्लेका अनुसार गृहमा संयोजक बाहेक चार जना स्टाफ नर्स र चारजना सरसफाइ एवं भान्छाका कर्मचारी रहेका छन् । गृह सञ्चालन गर्न कर्मचारीको बाहेक बिरामीको सङ्ख्याको आधारमा हरेक महिना रु ४० हजारदेखि ६० हजारसम्म खर्च हुने गर्दछ ।
कुपोषण भएका पाँच वर्ष भन्दा तलका बालबालिका उपचारका लागि गृहमा ल्याउने गरिन्छ । कुपोषणकै कारण कम तौल भएका ती बालबालिकालाई पौष्टिक आहारा खुवाउने र उनीहरुका आमालाई घरमा नै पाउने खाद्यान्नबाट कसरी पोषणयुक्त खाना बनाउन सकिन्छ भनेर तालिम दिइने काफ्लेले बताए ।
बजेट अभाव भएपछि साउनयता आफूहरुकै निजी खर्च र उधारोमा सामान ल्याएर बिरामी राख्दै आएको काफ्लेको भनाइ छ । गत वर्ष १५३ जना बालबालिका भर्ना भएको केन्द्रमा यसवर्ष हरेक महिना १० जना नयाँ भर्ना गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो ।
यसवर्ष बजेट नभएपछि लक्ष्यअनुसार भर्ना गर्न नसकिएको उनले बताए । हाल केन्द्रमा तीनजना मात्र बालबालिका रहेका छन् । १० श्ययाको क्षमता भएको भए पनि १५ जना सम्मलाई उपचार गरिँदै आएको थियो ।
अस्पतालका लेखा प्रमुख भृगु खनालका अनुसार कार्यक्रम सुनिश्चितताको पत्र प्राप्त भएमा अस्पतालको अन्य बजेटबाट व्यवस्थापन गर्न सकिने भए पनि पत्रसमेत प्राप्त नहुँदा समस्या भएको छ । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा श्रीराम तिवारीले बजेट छुट भएको जानकारी भएलगत्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयको सम्बन्धित शाखामा पुगेर जानकारी गराएको तर हालसम्म निकासा हुन नसकेको बताए ।
अस्पतालका तर्फबाट आवश्यक पहल भइरहेको उनले जानकारी दिए । सन् २०१२ अप्रिल २२ तारिखमा भरतपुर अस्पताल, नेपाल युथ फाउण्डेशन र दियालो परिवार नारायणगढले संयुक्त रुपमा गृह संञ्चालन गरेको थियो । त्यसको पाँच वर्षपछि गैरसरकारी संस्थाले गृहको सञ्चलनको जिम्मेवारी अस्पताललाई दिएका थिए । गृहमा आउने बालबालिकामा ८० देखि ८५ प्रतिशत उपचार सफल हुने गरेको जनाइएको छ ।
बदलिदै मौसम – चिसोको आगमन संगै स्वास्थ्यमा पर्ने प्रभाव
चितवनमा कोरोना संक्रमण बढ्दो, एकैदिन २१२ संक्रमित थपिए, दुईको मृत्यु
पछिल्लो २४ घण्टामा ३ हजार ८४० जनामा कोरोना संक्रमण, ३३ जनाको मृत्यु
नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा २,९७७ जना कोरोना संक्रमित थपिए, १८ जनाको मृत्यु
एक प्यान एक खोपको माग गर्दै पूर्वी चितवनका उवासंघद्धारा प्रशासनको ध्यानाकर्षण
Казино Вулкан Рояль официальному Сайт Казино Вулкан
Pin up Casino Hindistan
Взлом Казино Вулкан И Азино 777 Отзывы На Схемы Взлома Казино
University Of Glasgow Spin
अयोध्यापुरी ट्याक्टर ब्यबसायी समिति माडीद्वारा न्यौपानेलाई आर्थिक सहयोग
माडीमा रहेका चेपाङ्ग समुदायलाई युएन वमेनको सहयोगमा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धि सचेतना
रत्ननगरमा श्रावण १ गते देखि ५५ वर्ष माथिकालाई भेरोसिल खोप लगाइदै, अरु कसलाई लगाइदैछ ?
विहीवारदेखि रत्ननगर नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई घरघरमै स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने
कसले गर्‍यो रत्ननगरमा खोपको चरम दुरुपयोग ? अधिकांश ६२ वर्ष तलका, पहुचका आधारमा खोप
एक्सपर्टले बाड्याे चितवन, मकवानपुर, नवलपुरका स्वास्थ्य संस्थालाई अक्सिजन कन्सट्रेटर
नारायणी नदिको बाढीमा दाउरा टिप्नेको भिडियो कथा